१२ श्रावण २०७६, आईतवार ११:०८ admin	0 Comments
बिहान ७:३० बजे काममा हिडछु । म घरमा सुच्छु । यो मेरो श्रमले बनाएको घर हो । मेरो पैसाले किनेको जमिन हो । म यसको कर तिर्छु । मेरो छिमेकीले कोठा भाडामा लगाएका छ्न् । उनी त्यसको पनि कर तिर्छन् ।
म बिरामी हुन्छु, डाक्टरलाई जचाउँदा पनि कर तिर्छु । म औषधि किन्छु, त्यसमा पनि कर तिर्छु । म चस्मा किन्छु, त्यसमा पनि कर तिर्छु।
म यो देशको सन्तान हुँ । मेरो जिम्मेवारी छ, यो देश जोगाउने । म नागरिक हुँ यो देशको । मेरो जवाफदेहिता छ देशको संरक्षण गर्ने । तर, मलाई शासन गर्छन् मेरा देशका नेता । मलाई शोषण गर्छन्, मेरा नेता ।
मैले भर्खर एउटा सन्तान पाएँ । उसले यो देशलाई जोगाउन ज्यान पनि दिन्छ भविष्यमा । तर, उसलाई लिएर घर फर्किंदा मैले उसलाई पाएबापत कर तिरें । अब उसको नाम दर्ता गर्दा कर तिर्नुपर्छ । उसलाई स्कुल भर्ना गर्दा कर तिर्नुपर्छ। उसको विवाह दर्ता गर्दा कर तिर्नुपर्छ । उसको नागरिकता लिँदा कर तिर्नुपर्छ ।
डा. युवराज संग्रौला!
← धन्सार भत्किंदा एक जना सहित ६ बाख्रा पुरिए – फोटो फिचर
अष्ट्रेलियामा कार दुर्घटनामा परि दुई नेपालीको मृत्यु →
विदेशी च्यानल २४ घण्टाको लागी किन बन्द भयो ?? के हो Clean Feed ??
१० असार २०७६, मंगलवार १६:२० admin 0